मानिसलाई सताउने विभिन्न रोगमध्ये मस्तिष्कघात अर्थात ब्रेन स्ट्रोक पनि एउटा समस्या हो । विश्वमा हरेक वर्ष यो रोगले धेरै मानिसलाई सताइरहेको हुन्छ । हामीले यो कस्तो रोग हो, यसका लक्षण केके हुन्, उपचार कसरी हुन्छ र यसबाट जोगिन केके कुरामा सावधानी अपनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा डाक्टर सुवास फुँयालसँग कुराकानी गरेका छौँ । डा. फुँयाल न्युरो इन्टरभेन्सनिस्ट हुनुहुन्छ । उहाँले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सबाट न्युरो इन्टरभेन्सनका बारेमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानी :
मस्तिष्कघातका कारणहरु केके हुन् ?
उमेर पनि यसको एउटा कारण हो । उमेर बढ्दै गएको मानिसमा मस्तिष्कघात भेटिन्छ । मस्तिष्कघात अन्तर्गत दिमागको नसा बन्द हुने प्रकार अन्तर्गत जो मान्छे धेरै चिल्लो खान्छ, उसको शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा उच्च हुन्छ । लिपिडको मात्रा उच्च हुन्छ । गुलियो धेरै मात्रामा खानेहरुमा मस्तिष्कघात भएको हामीले भेटेका छौँ । धेरै मात्रामा रक्सी, चुरोट सेवन गर्नेहरुमा पनि मस्तिष्कघात भेटिन्छ । योबाहेक कम उमेरको मानिसमा पनि मस्तिष्कघात हुन्छ ।
यसमा मुटुको समस्या भएको व्यक्तिमा, मुटुको भल्भबाट जति रगत फ्याल्नुपर्ने हो त्यति रगत फ्यालिएन भने मुटुमा रगत जमेर रगतको ढिका हुन्छ । त्यो रगतको ढिका उछिट्टिएर दिमागको सानो वा ठूलो नसामा पुगेर बन्द हुन्छ । कुनै पनि मुटुको रोगी भएको मान्छेले नियमित रूपमा औषधि उपचार गर्नुहुन्न, नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नुहुन्न भने मस्तिष्कघात हुनेगर्छ । हाम्रो शरीरमा रगत पातलो गर्ने एउटा पदार्थ हुन्छ । जो मानिसमा ट्युमर हुन्छ, इन्फेक्सन हुन्छ, रगत बाक्लो गर्ने पदार्थ उत्पन्न हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि मस्तिष्कघात हुन्छ । कसैकसैमा जन्मजात रूपमा रगत पातलो गर्ने पदार्थ हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा पनि मस्तिष्कघात हुनेगर्छ ।
मस्तिष्कघातको उपचार पद्धति कस्तो छ ?
मस्तिष्कघात हुँदा दिमागको सानो वा ठूलो नसा बन्द हुने गर्छ । सानो वा ठूलो नसा बन्द भए पनि ४ घण्टाभित्र अस्पताल पु-याउन सकियो भने जमेको रगत पगाल्ने औषधि दिन सक्छौँ । साथै बिरामीको ठूलो नसा बन्द भएको छ भने उसलाई हामी क्याथल्याब भन्ने ठाउँमा ल्याउँछौँ । एक्सरेको मद्दतले खुट्टाको नसाबाट एउटा सानो तार लगेर जुन ठाउँमा बन्द भएको छ त्यो ठाउँसम्म लगेर बन्द भएको नसा खोलेर फेरि मस्तिष्कमा रगत पु-याउँछौँ र यसरी उपचार गर्छौँ ।
टाउको चिरी गरिने अप्रेसन र नचिरी गरिने अप्रेसनमा के फरक हुन्छ ?
न्युरो इन्टरभेन्सन यस्तो उपचार पद्धति हो जसमा दिमागमा पठाउने कुनै पनि रोग दिमागको नसा बन्द हुँदा, दिमागको नसा फुट्दा, दिमागको नसा गुजुल्टो परेर गुच्छा हुँदा टाउको नचिरीकन खुट्टाको नसाबाट तार पठाएर उपचार गर्न सक्छौँ । अहिले नेपालमा पनि यो प्रविधि भित्रिएको छ र यसरी नेपालमा पनि उपचार गर्न सकिन्छ ।